Raiso am-po ny Ray anaty anao Ray Liotta | Martech Zone
Raiso am-po ny Ray anaty anao Ray Liotta
Zoma, Aprily 12, 2013 Alatsinainy, May 6, 2013 Douglas Karr
Teo am-piandrasana ny toeram-pialan-tsasatra anay avy tany LA nankany San Francisco, dia nankeo amin'ny sidina i Ray Liotta. Niresaka tamin'ny mpiasa sasany izy ary nipetraka niaraka tamin'ny mpiara-miasa aminy. Iray amin'ireo fotoana tsy fantatrao izay tokony hatao… ianao ve io lehilahy io ary andeha hangataka sary? Sa avelanao irery ilay tovolahy satria mety ho sahiranan'ny olona mandritra ny andro izy. Tsy te ho tonga aho io lehilahy io… Fa mpankafy be aho. Nijery Goodfellas imbetsaka aho sy ny zavatra hafa rehetra nanomboka ny Field of Dreams ka hatramin'ny Operation Dumbo Drop ka hatramin'ny famonoana azy ireo moramora.
Lehilahy lehibe aho ka manidina ny kilasy voalohany aho fa tsy manintona mpanazatra ary mampalahelo ny mpiara-monina amiko. Nidina ny fiaramanidina ary nipetraka tao anaty 1B Andriamatoa Liotta ary diagonaly aho tamin'ny 2A. Nipetraka teo ivohony i Marty sy i Jenn. Teo am-piandrasana hiainga izahay dia nanontany mangina aho raha afaka maka sary an'i Andriamatoa Liotta rehefa niarina haka zavatra tao anaty kitapony. Ny valinteniny dia toy ny hoe namaky andalana iray tamin'ireo horonantsariny marobe izy. Nijery ahy maty teo amin'ny masoko izy ary nilaza hoe:
"Izao dia izao?! Tsia! Andraso mandra-pahatongantsika eto. ”
Amin'ny fomba ofisialy aho io lehilahy io. Manala tsiny ny fialan-tsiny aho na zavatra adala ary mangataka divay iray vera aho. 10 maraina.
Tsara ny sidina ary Andriamatoa Liotta aza mifampiresaka amin'i Jenn sy Marty mandritra ny minitra vitsy. Rehefa nilaza i Jenn fa manao marketing isika dia nilaza izy fa mila mamoaka ny teny amin'ny sarimihetsika vaovao isika, The Iceman. Rehefa avy nahita ny HBO manokana momba an'i Richard Kuklinski, tsy misy fomba tsy hahalalako an'ity sarimihetsika ity.
Miverina amin'ny sidina. Andriamatoa Liotta dia nifoha teo amin'ny 20 minitra avy teo amin'ny fipetrahana ary nandehandeha namakivaky ny efitranon'ny kilasy voalohany niresaka sy naka sary niaraka tamin'ny olona. Niondrika tamiko izy ary nilaza tamiko fa mila manao zavatra momba ny lanjako aho… ho faty aho raha tsy manao zavatra momba izany.
“Mahafantatra antitra mitovy habe aminao ve ianao?”
Mbola misimisy ihany aho.
Avy eo dia mitsambikina eo am-pofoako izy ary nanoroka ny takolako. Mihomehy daholo ny olona ao an-kabine ary naka sary i Marty:
Tsy mijanona eo ny tantara, mifanena ihany koa isika ary miresaka aminy eo an-tokonam-baravarana… diso fanantenana izy fa tsy tonga ny diany ary nanomboka nitangorona ny olona. Nanafatra izahay a limo avy any Uber ary ol lehibe Black 'Expedition Black Ford nanakodia. Nanolotra an-dRamatoa Liotta izahay mba hialana amin'ny seranam-piaramanidina. Nisaotra anay tamim-pahatsorana izy nefa nanapa-kevitra ny hamoaka izany amin'ny alàlan'ny fiverenana any amin'ny terminal. Manao veloma izahay ary misaotra azy indray noho ny sary.
Wow. Andro inona izany!
Tsy afaka nijanona tamin'ny firesahana ny zava-nitranga izaho sy i Marty, i Jenn. Ankoatr'izay, tsy afaka nino izahay fa ny fihaonana sy firesahana tamin'i Andriamatoa Liotta dia taratry ny zavatra hitantsika teo amin'ny efijery lehibe. Eo alohany izy, mangarahara ary milaza izay eritreretiny. Tsy nisy sivana… Midika izany fa TSY misy sivana. Tsy mpankafy an'Andriamatoa Liotta fotsiny aho izao, tena manaja sy mankasitraka ilay tovolahy noho ny fahitana fohy nifanena taminy.
Tsy dia manana sivana firy aho rehefa mihalehibe. Rehefa mametraka fanontaniana amiko ny olona, ​​dia tohina izy ireo indraindray amin'ny fahitako ny valiny. Tsy hoe manandrana manao hadalana aho fa matetika no tonga tamin'izany fomba izany. Heveriko fa maro ny olona no tsy afaka nilaza ny heviny. Miaina ao anaty fiarahamonina mahery setra mandehandeha isika izay mandray tanana sy mamihina anao ny olona, ​​avy eo mandehandeha ary miresaka momba anao ao aorianao.
Ivelan'ny namako akaiky indrindra dia tsy dia be loatra ny olona mifanehatra amiko amin'ny lanja. Faly aho fa nanao Andriamatoa Liotta… namono ahy tokoa ity dia ity. Ao amin'ny efi-trano fandraisam-bahiny tokoa aho no marary lamosina - manoratra izany fa tsy any San Francisco mankafy ny toetr'andro tsy mampino. Rehefa tafaverina any Indy aho dia mametraka ny valin'ny bisikiletako ary hanomboka mitaingina kilometatra vitsivitsy mankany amin'ny biraonay. Nikasa ny hanao izany sahady aho, saingy ny fahatsoran-tenan'Andriamatoa Liotta no nanampy ahy hanery ahy hametraka ilay olana.
Raiso am-pitiavana Ray Liotta ao anaty.
Mila manao ny marina hatrany isika rehetra. Miaina ao anatin'ny tontolon'ny phony isika… manidina any amin'ny lavaka tsy hita noanoa satria tsy misy te-hanao ny marina amin'ny tsirairay - na eo aza ny fahasalamantsika, ny governemanta, ny varotra ataontsika ary na ny orinasantsika aza. Raha nampianatra ahy zavatra ingahy Liotta tamin'io sidina io dia foana mahitsy sy misokatra.
Apr 12, 2013 ao amin'ny 12: PM PM
Tena milay Doug. Soso-kevitra hanaraka… Tsapako fa efa ela loatra aho no lasa nifarana tamin'ny resaka nifanaovako taminao. Mila manao an'izany aho… ary koa “tohizo ny saosy”
Apr 12, 2013 ao amin'ny 4: PM PM
Lahatsoratra tsara Doug (toy ny mahazatra). Mandeha kilometatra vitsivitsy mankany amin'ny biraonao? Nifindra ve ianao? Nifindra ve ny birao? Mino aho fa manodidina ny 15 km miala ny Greenwood mankany afovoan-tanànan'i Indy. Mila mandeha bisikileta indray aho. Vao tonga tany an-trano aho rehefa avy nijanona tamin'ny fanatanjahan-tena Grey Goat ary nijery bisikileta. Tokony hampiofana amin'ny RAIN aho amin'ny volana Jolay. Karazana zava-dehibe ny fananana bisikileta mahafinaritra hanaovana izany.
Tsy nihetsika izahay, Jason. Manana talantalana bisikileta napetraka aho hahafahako mijanona eo amin'ny Cultural Trail, avy eo mitaingina ny birao. Zavatra tsara!
Apr 12, 2013 ao amin'ny 5: PM PM
Aha! Manazava izany! Mbola nanandrana namantatra ny fifandraisana misy eo amin'ny filan'ilay talantalana SY bisikileta amin'ny birao aho. Tena milay!
Apr 15, 2013 amin'ny 6: 10 AM
Tena mahafinaritra! Saro-kenatra be foana amin'ny olona malaza aho. Fa nahoana? VAHOAKA fotsiny izy ireo, marina! Eny ho anao ry zalahy! Toa olona tena izy izy!
May 6, 2013 amin'ny 10: 12 AM
Lahatsoratra mahafinaritra, mahitsy ary marefo mahafinaritra Douglas. Misaotra anao. Manantena ny hahafantatra ny tena anao aho. Ary ohatra iray tena lehibe amin'ny tena filan'ny fiainana… ny tena maha-izy anao.
May 6, 2013 amin'ny 10: 15 AM
Ankasitrahana indrindra @ facebook-100000206689471: disqus!